Andro iraisam-pirenena ho an’ny Nelson Mandela : Hankalazaina manerana ireo oniversite lehibe enina -
AccueilRaharaham-pirenenaAndro iraisam-pirenena ho an’ny Nelson Mandela : Hankalazaina manerana ireo oniversite lehibe enina
04/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hiavaka tsy toa ny isan-taona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Nelson Mandela amin’ity taona 2017 ity. Raha teto an-drenivohitra hatrany no nanantanterahana izany teo aloha teo dia fantatra fa hankalazaina manerana ireo oniversite lehibe miisa 6 eto Madagasikara, izay eo ambanin’ny fiahian’ireo orinasa ifotony. Samy handray ny hetsika “Mandela day” avokoa izy ireo. Hanamarika izany ny hetsika fitadiavam-bola ho an’ireo kamboty, fandaharan’asa ho an’ny tanora mpitarika, fivoriana virtoaly miaraka amin’ireo mpianatra any amin’ny oniversite atsy Afrika Atsimo, fanavaozana ny trano fianarana ary hetsika ara-panatajahantena maro. Mahakasika ity fankalazana ity indrindra, tonga nitsidika ara-pombam-panajana ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier ny Ambasadaoron’ny Repoblikan’i Afrikanina Atsimo, Sem Maud Vuyelwa Dlomo. Fitsidihana izay nampahafantarana ny Praiminisitra ny fandehan’ny fanomanana ireo hetsika rehetra eny ifotony hanamarika izany andro izany.
Nahatsapa ny Praiminisitra Mahafaly Olivier, tetsy ankilan’izay fa ity finiavana hanetsika ireo oniversite Malagasy amin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Nelson Mandela ity no hahafahan’ireo mpianatra Malagasy mahafantatra tsara ny tantaran’ireo mpitolona tamin’ny andron’ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny gadra pôlitika malaza maneran-tany. Nambarany fa zava-dehibe ny fandraisana anjaran’ireo orinasa ifotony, noho ireo oniversite tsy manana loharanom-bola ampiasaina amin’ny fankalazana izany andro izany. Nankasitraka feno ny Ambasadaoron’i Afrika Atsimo ny Lehiben’ny governemanta noho ny finiavana ananany sy ny zavatra rehetra nataony, nampanantena ny tenany fa handray anjara. “Tokony ho raiketina ho tantara ny hetsika, ary heveriko fa efa misy ny komisiona napetraka amin’ny fandaminana ny asa”, hoy hatrany ny Praiminisitra namarana ny teniny.
Voahaja ny lôjika. Tao anatin’ny andro efatra nifaninanana teo amin’ny taranja beach soccer amin’ilay “Festival Tamaga Midôla”, mbola tsy resy mihitsy ry zareo avy any Melaky. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina ao Toamasina ...Tohiny